जेष्ठ १०, २०७६ उज्ज्वल प्रसाई
पश्चिम बंगालको नक्सलबारी बजारबाट काँकरभिट्टा फर्कने क्रममा हामी ती अविचल मूर्ति र चलायमान मानिसछेउ अडिन्छौँ । अर्धकदका मूर्तितर्फ देखाउँदै तिनलाई सोध्छौँ, ‘यी मूर्ति कसका हुन् ?’ एक जना जवाफिन्छन्, ‘इन्डियासँग लड्न आएको ब्रिटिसलाई हराउने मान्छेका होलान् ।’
केन्द्रीय सत्तामा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको ‘राज’ स्थापित हुँदै गरेको समय थियो ।
कम्युनिस्टलाई कुनै बेला क्रान्तिको अतिशय रोमाञ्चकता र कुनै बेला त्रान्ति–संकथनका अकर्मण्य विलासितामा रमाउने उपक्रमले गाँजेको थियो । सत्ता–उन्मादका सिंगुर र नन्दीग्राम जस्ता कथानक छँदै छन् । समग्रमा, अस्तित्व निमिट्यान्न नभए पनि वामपन्थी राजनीतिको धुकधुकी धिमा हुँदै गएको समय थियो त्यो । पाँच वर्षमा कहिले सुस्तरी र कहिले वेगले बगेको बालासन नदीले त्यही धुकधुकीमा निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । अहिले भने नक्सलवाद, भाकपा (मार्क्सवाद) र तृणमूल कांग्रेसका समेत केही अंश बगेर भाजपाको गेरुवा गुफामा थिग्रिए ।
भर्खरै सम्पन्न भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मोदीका नाममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दुवादी राष्ट्रवाद विजित ठहरिएको छ । जसले राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद र हिन्दुवादका बलिया संकथन निर्माण गर्न र प्रसार गर्न सक्यो, निर्वाचनमा त्यसैले बाजी मार्‍यो  । मुलुकभर प्रभाव पार्न सक्ने सञ्चार माध्यममा सबैभन्दा बलियो पकड भाजपाको थियो । आरएसएसका असंख्य शाखाहरू सधैँ जनतामाझ रहे, तिनका दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पारिरहे । साथै जनतालाई हिन्दुवादी संकथन सधैँ सम्झाइरहे ।
गोविन्द पन्सारे, एमएम कलबुर्गी र गौरी लंकेशजस्ता विद्वान्को हत्या मोदी–सत्ताले वरण गरेको असहिष्णु राष्ट्रवादको परिणाम हो । निखिल वाग्ले र राना अयुबजस्ता पत्रकारले बेहोरेका कहर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वीकृत हुनुपर्ने हो । आनन्द तेलतुम्बडे र कान्चा इलैयाले भोगेका सकस र उनीहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बोलिएका धावा मोदी असफलताका दसी हुन् । असफलताका यी विदारक कथा बिकाउ संकथन बन्न सकेनन् ।
निर्वाचनविज्ञका रूपमा परिचित राजनीतिशास्त्री योगेन्द्र यादवले भारतीय लोकसभा निर्वाचनलाई ‘चुनाव–हरण’ प्रक्रिया भनेका छन् । अर्थात्, २०१९ को चुनावी नामको तमासामा जनताले आफ्नो जीवनसँग सरोकार राख्ने सवालमा सोचेर सही नेतृत्व चुन्ने अवसर पाएनन् । बरु त्यो प्रक्रियाको बलात् हरण गरिएको उनको विश्लेषण छ । सञ्चारका सबै प्रभावकारी माध्यममा राज्यसत्ता र स्रोतको आडमा कब्जा जमाउनु, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्नु, फरक मत राख्नेलाई हदैसम्म बदनाम र अवैध ठहर्‍याउन सफल हुनु निर्वाचन प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रको प्राण हराउनु हो ।
कारण, भाजपाले जनताले बुझ्ने भाषामा बोल्छ, तिनका धार्मिक र आध्यात्मिक तुष्टि पूरा गरिदिन्छ, साथै तिनका भावुकता र उत्तेजनामा उसले आफ्ना राजनीतिक आवेग मिसाइदिन सक्छ । जनताको त्यो तहले कस्तो भाषा बुझ्छ, तिनका कस्ता मुद्दामा दलको भरोसा स्थापित गर्न आवश्यक छ र तिनलाई लोकतन्त्रको मर्म बुझाउन कस्तो सांगठनिक काम जरुरी छ भन्ने ठहर्‍याउन नसक्नु प्रतिपक्षको कमजोरी हो । उचित सिद्धान्तबाट आफू दीक्षित छु र सत्यको ठेक्का आफूसँग मात्र छ भनेर घमन्ड गर्ने तर सत्यका असली पहरेदारसँग संवाद स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भोग्नुपर्ने परिणाम गेरुवा गुफा नै हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व संकट पेचिलो विषय बन्यो । नेतृत्वको बागडोर गान्धीइतर व्यक्तित्वमा नपुग्नु एउटा समस्या हो भने सैद्धान्तिक अस्पष्टता र सो अस्पष्टताको दुष्प्रभावमा देखिएको सांगठनिक अकर्मण्यता पनि उत्तिकै दोषी छ । कांग्रेसले भाजपासँग सैद्धान्तिक असहमति राख्ने अन्य घटकलाई दक्षिणपन्थविरोधी मोर्चामा गोलबद्ध गर्ने क्षमता नराख्नुको परिणतिस्वरूप आरएसएस विजयी भएको हो । साथै मनमोहन सिंह नेतृत्वका अघिल्ला दुई सरकारले गरेका अनेक नकामबारे पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासका संकथनमा भाजपाभन्दा फरक र प्रभावकारी बन्न नसक्नुले पनि राहुल गान्धी उचित विकल्प नठहरिएका हुन् ।
भारतमा मोदीको दोस्रो विजयले नेपाली राजनीतिलाई गलत ढंगले दीक्षित गर्ने सम्भावना छ । अर्थात्, राष्ट्रवादी प्रोपागान्डाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रसार, त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा पकड वा अंकुश र राज्यशक्तिको आडमा सबै संस्थामा दलीय कब्जा गर्ने रणनीति निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति हो । यस्तो दीक्षा हाम्रो शिशु गणतन्त्रका लागि घातक हुनेछ ।
जेष्ठ १०, २०७६ दीप्स शाह
एकाबिहानै म दैलो उघारेर यसो बाहिर हेर्दै मात्रै थिएँ, एउटा बाइक छेउमै टक्क रोकियो । एउटा ठिटो उत्रियो र पन्जा लगाएका हातले सडकपेटीबाट केही टपाटप टिपेर बाइकपछाडिको बाकसमा हाल्यो । अनि कतै बत्तियो । उसले खासमा के गरेको थियो, मैले भेउ पाउन सकिनँ ।
अर्को एकबिहान म हुलाकतिर लम्किँदै थिएँ । एउटा बाइक मेरै छेउ आएर रोकियो, म पनि रोकिएँ । बाइकबाट त्यही पहिलेकै जस्तो ठिटो उत्रियो र मलाई ‘एक्सक्युज मी’ भन्दै सडकपेटीमा लडिरहेको सुकेको फोहोर उठायो । मैले थाहा पाएँ, त्यो फोहोर कुकुरको आची थियो । यो ठिटो पनि काम फत्ते गरेपछि उसै गरी बत्तियो ।
तेल अभिभ छेउको सानो गाउँ मोनोसोनका यी दृश्यले, दायाँ–बायाँ फोहोरको थुप्रो बीचबाट निसासिँदै हिँड्ने मुलुककी प्राणीलाई अचम्ममा पारे । इजरायलमा कुकुरको आची टिप्ने काम पनि गरिने, त्यो पनि ह्यान्डसम लक्का जवानले !
वैदेशिक रोजगारीका लागि भर्खर–भर्खर देश छाडेकी मलाई इजरायलका सडक र गल्ली कसरी सुकिला भएका होलान् भन्ने लागिरहेको थियो । जवाफ त्यस्तो पाइयो ! पहिरनले टल्किनु मात्रै सभ्यताको सूचक कहाँ हुँदो रहेछ र ! कुनै पनि समाज वा समुदाय कति सुसंस्कृत छ भन्ने बुझ्न घरभित्रै पस्नु नपर्ने रहेछ भन्ने बोध भयो, मलाई ।
म हुलाकतिर लम्किइरहेकै थिएँ, पछाडि महिलाको च्याँट्ठिएको स्वर सुनियो, ‘एक्सक्युज मी, तिमीले यो के गरेको ? कुकुरको आची बाटोमा छोड्न लाज लाग्दैन ?’
कारबाट एउटी गोरी कराइरहेकी रहिछ । कुकुर समातेर सडकपेटीमा उभिइरहेकी अर्की महिला अँध्यारो मुख लगाएर बोली, ‘अझै गर्छ कि भनेर पर्खेको । यो फोहोर म फालिहाल्छु नि !’
कुकुरवाली महिला फोहोर तह नलगाई अघि बढ्ली भन्ने लागेर त्यो कारवाली कराएकी रहिछ । कुकुरवालीले हत्त न पत्त आची उठाई र पर सडक किनारमै रहेको बाकसमा फाली ।
म सरासर हुलाक पुगेर आफ्नो पोस्ट बक्स खोलेँ अनि भएजतिका चिठीपत्र बोकेर फर्किएँ । बाटामा ओहोरदोहोर गरुन्जेल मेरो मनमा कुकुरको आची बटुल्ने ठिटो, बाटामा बिस्ट्याउने लुरे कुकुर र उसकी मालिक्नी र अनि
कारवालीका कुरा खेलिरहे ।
िजेल पोतेर कपाल चुच्याएको ठिटो जो कुकुरको आची टिप्ने काम गर्छ, तर उसको अनुहारमा कुनै ग्लानि छैन । बिन्दास आफ्नो काम गरेको छ, बाइकमा उडेको छ, कमाइ गरेको छ । मैले नेपालमा त्यसरी कुकुरको आची बटुल्ने काम आत्मसम्मानपूर्वक गर्न सकुँला ? मुस्किल छ । हाम्रोमा कर्मप्रति सम्मान गर्ने सभ्यताको विकास भएकै छैन । हामी धनमा गरिब छौँ नै, सोचमा झन् कंगाल छौँ ।
कारमा सुइँकेर आउने त्यो गोरीले जसरी कुकुरवालीलाई झपारी, हाम्रोमा त्यसरी सही कुरो सही समयमा उठाउने हिम्मत कसैमा छ ? म आफैंमा छ ? अहँ, छैन ।
नम्र भएर आफ्नो गल्ती स्विकार्दै सफा गर्ने कुकुरवालीको झैं सभ्यता हामीले देखाउन सकौँला ? म देखाउन सकुँला ? हामीमा सरसफाइ र सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम अवश्य बनेका होलान्, तर सिकेका कुरा व्यवहारमा उतार्न कसरी सक्नु ! स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सवालमा सुधार आउन नागरिक स्वयं सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हेक्का हामीलाई छैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४५